Maxay ka dhigan tahay tallaabada uu Farmaajo qaaday? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay ka dhigan tahay tallaabada uu Farmaajo qaaday?
Qar-iska-tuurnimo siyaasadeed, ayuu xalay saqdii dhexe ku dhaqaaqay, Madaxweynihii hore Farmaajo, isaagoo doonayo inuu daboolo dadaallada lagu doonayo in ay caddaalad ku hesho Ikraan Tahliil oo ku maqan gacanta Fahad iyo Farey.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii muddadu ka idlaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa mar kale qaaday tallaabo u muuqata is-miidaamin siyaasadeed, kadib markii uu xil cusub u magacaabay taliyihii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, eedeysane Fahad Yaasiin, isla-markaana uu dallacsiiyay Taliyihii NISA ee Gobolka Banaadir Yaasiin Farey, oo labaduba ku eedeysan af-duubka iyo dilka Ikraan Tahliil.
Farmaajo, oo si buuxda uga hor yimid go’aankii uu Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, xilka Agaasimaha NISA, kaga xayuubiyay Fahad Yaasiin, ayaa sheegay inuu aqbalay is-casilaad uu soo gudbiyay taliyihii hore, wuxuuna u magacaabay La-taliyaha Amniga Farmaajo.
Xilka cusub ee loo magacaabay eedeysanaha reer Hiiraan, ayaa lagu tilmaamay in uusan sharciga waafaqsanneyn, maadaama uu ku socdo baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil, oo ku maqan gacanta Nabad-sugidda, isla-markaana dastuurka daka u yaalla uusan Madaxweynihii hore u ogooleyn inuu xil ka qaadis iyo magacaabid toona sameeyo.
Sidoo kale, Farmaajo, ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday, magacaabiddii Ra’iisul Wasaare Rooble ee Bashiir Goobe, wuxuuna xilka Agaasimaha Hay’adda NISA, si ku meel gaar ah ugu magacaabay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Farey), oo gaarigiisa lagu afduubay Ikraan Tahliil.
Tallaabadaan ayaa aheyd mid laga filanayay, Farmaajo oo aamini la’ in muddada xil heyntiisii idlaatay ku dhawaad 7 bilood ka hor, ayaa ka dhigan inuu geed dheer iyo mid gaabanba u korayo, siduu u dabooli lahaa kiiska af-duubka iyo dilka ah ee ay ku eedeysan yihiin ragga uu xilka u magacaabay.
Fahad Yaasiin, Kulane Jiis iyo Yaasiin Farey, waxa ay shacabka Soomaaliyeed rumeysan yihiin in ay si toos ah ugu lug leeyihiin kiiska khilaafka sababay, halka uu hadda si weyn u xoogeystay shakiga ku aaddan in Farmaajo wax ka ogaa khaarijinta Ikraan Tahliil.
Khilaafka u dhaxeeya labada dhinac, (Farmaajo iyo Rooble) ayaa cirka isku shareeray, kadib markii uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, shaqada ka raacdeeyay, Fahad Yaasiin, oo tan iyo billowgii 2017, daaha gadaashiisa ka maamulayay siyaasadda dalka.
Sidoo kale, Farmaajo, wuxuu isugu yeeray kulan ay yeelanayaan waxa loogu yeero (Guddiga Amniga Qaranka) kaas uu sheegay in ay 18-ka Sebteembar 2021, ay isku imaanayaan, si loo dhageysto warbixinta Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, ee ku saabsan dilka Ikraan.